Kutungamirira Free - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Nokuda kwezvakatipoteredza zvavanotyira, pcb Anoshamisa anopa pcb zvinhu uye pcb gungano mabasa maererano RoHS mirau zvinoda zvakaoma Kuwanda 6 zvinhu ngozi kusanganisira Kutungamirira (Pb), Mercury (HG), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Kr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB) uye Polybrominated Diphenyl ethers (PBDE) ari kugadzira zvigadzirwa uye magetsi zvigadzirwa. Pakati mhando zvinhu zvitanhatu, kutungamirira ndiyo inonyanya kuiswa nokuti anotamba runokosha uye rinokosha mune zvemagetsi yakanamirwa pamifananidzo. Naizvozvo, kutungamirira isina mhinduro ndivo Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri mushonga nokuda RoHS-enderana pcb gungano.
Kazhinji, kutungamirira akasununguka kugadzira kunonyanya anouya mutobvu isina solder zvemichina uye kutungamirira-vakasununguka zvinoriumba uye zvinhu.
Uyezve, zviri zvikuru kukosha kusarudza kutungamirira isina zvinhu kuti vanokwanisa withstanding yakakwirira tembiricha sezvo yaitsiva zvetsika solder zvokunyama. Uyezve, zvinoyerera mutobvu isina solder kunofanira zvikuru kushingaira kupfuura rosin zvinoyerera zvetsika solder.
Uyezve, zvinoriumba vanobatanidzwa mutobvu isina pcb gungano kuti zvinodiwa kuti mutobvu isina abvume vazvidavirire nokuda akavimbika uye suitability ose okupedzisira zvigadzirwa. Nokuda kwemakore anopfuura 20 'ruzivo mumunda ichi, pcb Anoshamisa yakaramba yakadaro refu-refu uye ushamwari pamwe ukama pakati mukurumbira zvinoriumba vanogadzira Distributors pasi pose kuti isu' kuzodzosera vanokwanisa kuwana yepamusoro kutungamirira isina zvinoriumba kuti vatengi edu akazadza pamwe kwezvakatipoteredza zvaimunetsa.
Unogona kusarudza kutungamirira isina pamusoro kumugumo Ipfungwa kuburikidza kunhonga tsamba zvinhu yedu pcb Quote webpage. Kuti uwane zvinodiwa maererano kutungamirira isina mhinduro, sununguka kwatiri kuwana kuburikidza wonderful@wonderfulpcb.com nokuda neindaneti.